Teny Frantsay Nouveau vs. Neuf
by Nouveau vs Neuf
Ireo mpandika teny anglisy indraindray dia sarotra indraindray ny mandika teny "vaovao" amin'ny teny Frantsay, noho ny fisafotofotoana amin'ny teny frantsay nosveau sy neuf . Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny frantsay Ny olana dia vokatry ny hoe ny "Anglisy" anglisy dia manana dikany mihoatra ny iray. Soa ihany fa olana sarotra izany. Vakio ity lesona ity, fantaro ny fahasamihafana misy eo amin'ny Nouveau sy ny Neuf , ary dia tsy hisy olana intsony ny hilaza vaovao amin'ny teny Frantsay.
Nouveau dia midika vaovao amin'ny hevitry ny vaovao amin'ny tompony - fiovana na fanatsarana; Izany hoe, zavatra vaovao izany satria hafa noho izay efa niseho aloha izany, na tsy dia vaovao avy ao amin'ny fivarotana. Ny mifanohitra amin'izany dia ny ancien (taloha).
Hitanao ve ny fiarako vaovao?
(Ny fiara dia tsy voatery vaovao avy ao amin'ny orinasa, vaovao eto dia midika vaovao amin'ny mpandahateny.)
Il a mis un nouvelle chemise.
Nametraka akanjo vaovao izy.
(Nesoriny ny lobaka nataony ary napetrany teo amin'ny toerany ny hafa. "Mety" na mety tsy ho vaovao avy amin'ny fivarotana ny shirt "vaovao", fa ny zavatra hafa dia tsy mitovy.)
(Nividianako / nahita / nanao azy aho.)
Manana trano vaovao izahay.
(Nifindrafindra fotsiny izahay.)
Hitako ny tetezana vaovao.
(Ny fanoloana an'ilay iray efa nesorina.)
Ny Nouveau dia mialoha ny anarana amperin-tsoratra ary manova ny heviny amin'ny lahy sy ny vavy.
Nouveau manana endrika manokana ho an'ny teny masculins izay manomboka amin'ny zanatsoratra iray: Nouvel .
Mariho fa ny vaovao isika dia ampahany vaovao ary ny vaovao dia manondro ny vaovao amin'ny ankapobeny.
Neuf dia midika vaovao amin'ny hevitry ny marika vaovao, vaovao avy amin'ny orinasa, voalohany amin'ny karazany.
Ny mifanohitra amin'ny neuf dia vieux (antitra).
I n'ai jamais acheté une voiture neuve.
Tsy mbola nividy fiara vaovao aho.
(Mividy fiara foana aho.)
Nividy akanjo vaovao izy.
(Nankany amin'ny toeram-pivarotana izy ary nividy akanjo vaovao.)
Tsara tahaka ny vaovao.
(Voafetra, ary ankehitriny dia tahaka ny vaovao ihany izany.)
(Miaina trano vaovao izahay.)
Hitako ny Pont Neuf (any Paris).
(Na izany aza no tetezana tranainy indrindra any Paris, tamin'ny fotoana nanorenana sy nanonona azy, dia tetezana vaovao no hita eo amin'ny toerana marika vaovao.)
Neuf dia manaraka ny anarana amperin-tsainy ary miova mba hifanaraka amin'ny lahy sy ny vavy miaraka aminy:
Tsarovy fa ny neuf ihany koa no isa sivy:
J'ai neuf cousins - manan-janaka sivy aho.
Raha fintinina, ny hoe nouveau dia midika hoe niova ny zava-drehetra, raha toa kosa ny neuf dia manondro fa misy zavatra vao vita. Amin'ny alalan'ity fahalalana vaovao ity, dia tsy tokony hisy olana intsony raha manapa-kevitra raha mampiasa neuf na nouveau .
Ny fahasamihafana eo amin'ny paosin'ny frantsay toy ny An / Année
Manonona Numbers amin'ny teny anglisy
Réussir - hahomby
Fampidirana ny teny Japoney Koishii
Die Bremer Stadtmusikanten - Lesona Lesona Lesona
Fantaro ireo famaritana fototra momba ny "Sonner" (mba hihira)
Top Ten Fampiasana Mahazo
Maneno amin'ny teny Japoney ny biby
Ahoana no hanehoana ny tahotra amin'ny teny espaniola?
Tanàna Amerika Avaratra
Ny tantaran'ny Polyester
Manonona ny 'R'
Ny Politika fampakaram-bady ny Kongresy
Ny adiresin'ny Southern Arkansas University
Fotoana fohy momba ny fizotran'ny artista Paul Gauguin
9 Boky hanampiana anao hanomana ny tanànanao
Ny teny ampiasain'ny mpampianatra dia afaka manampy na manimba
Ampiasao haingana amin'ny fanatanjahantena ara-panatanjahatena
Inona no atao hoe Plasma? (Fizika sy Chemia)
Toe-karena FRP Composites
Compromise de 1877: Fandrindrana ho an'i Jim Crow Era
Fantaro hoe firy ny olona nitsidika ny tranokalan'ny Super Bowl nandritra ny taona
Fantaro ny hasarobidin-tsolika sy ny fomba amam-panao amin'ny sary hosodoko sy sary
Tantara grika tranainy: Stat
Calvin Coolidge: Filoha fahatelon'ny Etazonia
Manorata Rose amin'ny sifotra vita amin'ny fibre
Il vaut mieux que mila ny singulim-bidy?